Shina 10m Fiarovana amin'ny haingon-tsoavaly haingon-tsarimihetsika fanamboarana sy famokarana horonantsary | MOLONG
Sarimihetsika fanarenana tatoazy miaro 10m miaro
Sarimihetsika Tattoo Aftercare
Breathable, tantera-drano, azo ovaina
1.Fandehanana tsara amin'ny rivotra, manakana ny areti-mifindra amin'ny bakteria.
2.24ora hampitomboana ny fisitrohana oksizenina, mamorona horonantsary miaro haingana.
3. Arovy ny velaran'ny tatoazy, fisorohana ny bakteria ivelany hiditra amin'ny ratra tatoazy.
4.Lamin'ny fomba fanadiovana dia tsotra, ny vokatra dia sosona 3, manala ny sosona voalohany ary apetraka
5.Ny sosona faharoa eo ambonin'ny hoditry ny hoditra, ary avy eo dia triatra ny sosona ambony indrindra Ok.
6. Ampiasao mandritra ny 3 andro, tantera-drano.
Sarimihetsika miaro, malefaka ary tsy miaro amin'ny rano tantera-drano ampiasaina hiarovana ny tatoazy sy hanampiana amin'ny fanasitranana maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fisorohana ny loto sy ny mikraoba.
Mampihena ny areti-mifindra - Miteraka fofonaina voajanahary ny hoditra ary mivoaka rano, rivotra ary hatsembohana. Fampihenana ny scabies, Tsy dia atahorana ho voan'ny aretina na antony ivelany hafa izay hanimba ny tatoazy.
Atsipy - Manokàna bakteria avy any ivelany amin'ny fomba mandaitra. Ny patch dia mampihena ny fahasimban'ny hoditra ary manakana ny bakteria ivelany hiditra amin'ny tatoazy.
Mahay miaina tsara - Mametaka ny oxygène mamela ny oksizenina hiditra sy etona ny hamandoana, mitazona ny lokon'ny tatoazy.
Fampiasana midadasika - Ity fehin-kibo ity hanasitranana ny tatoazy dia afaka miaro ny tatoazy vaovao amin'ny fikororohana, manakana ny bakteria ivelany hiditra amin'ny ratra amin'ny tatoazy.
Antoka mahafa-po ny mpanjifa 100%: Raha tsy afa-po amin'ny vokatray ianao dia hanome anao vola 90 andro na antoka fiovana.
Ny fotoana fampiasana dia aorian'ny faran'ny tatoazy, ary azo tapaka tsy ara-dalàna arakaraka ny haben'ny modely. Manolo-kevitra ny lafiny efatra amin'ny sticker izay namboarina dia tokony hihoatra ny 1 sm amin'ny ampahany amin'ny tatoazy mba hiarovana tsara kokoa ny ampahany amin'ny tatoazy.
Ny lahatsoratra voalohany: Aorian'ny fanadiovana ny ratra aorian'ny tombokavatsa, apetaho mandritra ny 2-3 ora ilay sticker, miaro ary esory ny tsiranoka mivaingana mba hadio ilay ratra.
Lahatsoratra faharoa: Rehefa nesorina ny paositra voalohany dia diovy ny ratra ary apetaho indray ny paositra faharoa mandritra ny telo andro, fa tsy mihoatra ny herinandro.
Raha sendra ireto fepetra manaraka ireto ianao dia atsaharo ny fampiasana ilay mpiaro paositra faharoa, raha tsy izany dia tsy mahomby amin'ny fanarenana tatoazy.
1. Somary lehibe ny fery amin'ny hoditra. Aorian'ny famongorana ny paositra voalohany dia mihena hatrany ny tsiranoka ao anaty rà.
2. Mipoitra mena ny hoditra ary mangidihidy manodidina ny sticker izay miaro azy, manondro fa tsy mahazaka ny fonon'ny mpanjifa ny hoditry ny mpanjifa.
3. Ny fomba fanaovana sary dia tena tsotra. Ny vokatra dia sosona 3, ny sosona voalohany dia rovitra, ny sosona faharoa dia miraikitra amin'ny hoditry ny hoditra, ary farany azo esorina ny sosona ambony.
Previous: Rotina backrest tatoazy seza solosaina seza salon hatsaran-tarehy asa seza tokantrano manandratra boribory seza bar
Manaraka: Kitapo miaro manga azo ampiasaina amin'ny tadin-tsarimihetsika Tattoo Clip 125pcs Sleeves vita amin'ny plastika
Kitan'ny tatoazy miaraka amin'ny masinina rotary tsy misy aliminioma ...